Allgedo.com » Warbixin aad halis u ah: Isbaheysiga Rajo “Soomaaliya dal, dad iyo duunyaba waa la waayi doonaa haddii qaybta afaraad ee qorshaha duminta Soomaaliya oo hada bilowga ah uu hirgalo” (Daawo Video)
Warbixin aad halis u ah: Isbaheysiga Rajo “Soomaaliya dal, dad iyo duunyaba waa la waayi doonaa haddii qaybta afaraad ee qorshaha duminta Soomaaliya oo hada bilowga ah uu hirgalo” (Daawo Video)
Print here| By: allgedo.com: Sunday, May 7, 2017 // u Jawaab
Waraysi oo xubin ka mid ah isbahaysiga RAJO uu siiyay Talevisionka caalamiga ah ee STN ayuu wuxuu aad u falnqeeyay sida cilmiyaysan ee
Soomaliya qaranimadeedii loo dumiyay, iyo qorshaha dahsoon ee Soomalia lala damacsan yahay in eey ku dambayso.
Cabdi casis Moxamud oo ka mid ah aasaasayaasha Rajo ayaa wuxuu tibaaxay in duminta Soomalia eey isu kaashadeen Shisheeya dano dhaqaale ka leh Soomalia iyo Soomali u adeegayay dadkaas ajaanibta ah. Waxaana hadlakiisi ka mid ahaa: “ Soomalia waxaa la marsiiyay sadax xili oo ka bilaabmaya sideetameeyadii (80’s), kuwaas oo kala ahaa”:
1- In shacabka dareenka iyo xilkasnimada lagala dagaalamo.
2- In xasiloonida dalka la lumiyo iyadoo nabadgalyada lala dirirayo.
3- In bur – bur baaxad wayn leh dalka lagu dhufto. Markaana mudo lagu sii hayo dalka xaalad aan daganayn mudo 20 sano kor u dhaafaysa si
dhamaan waxyaabihii ummada midayn jiray loo ciribtiro, intii xasuusta maamulka wadanka haysana ee u dhamaadaan.
4- In dib u sax dan laga leeyahay la sameeyo oo ah tan hada bilaaban doonta, oo la rabo in nidaamkii la qorsheeyay oo eey isleeyihiin waa hirgalay la xoojyo si danihii dhaqaale markaan si fudud loo wada fushado.”
Cabdicasis waxaa uu sheegay in sida kaliya ee lagu joojin karo khiyaamadaas nacabku uu qorsheeyay eey tahay in shacabkoo idil eey si isku mid ah u wada gartaan qatartaas dalka lala damacasan yahay, iyadoo sideey Soomalidu horey u ahaan jirtayba loo baahan yahay in si wadajir ah oo nabadeed looga wada hortago.